Kismaayo News » Wasiir Jamaal oo Somaliland sonkorta ku kiciyay
Wasiir Jamaal oo Somaliland sonkorta ku kiciyay
Kn: Wasiirka qorshaynta iyo maalgashiga ee dawladda federaalka Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan iyo wafti uu hogaaminayo ayaa socdaal ku tagay magaalooyinka Badhan iyo Dhahar, kuwaasi oo Somaliland ay sheegato inay ayada hoosyimaadaan oo ka arimiyaan.
Socdaalka Jamaal uu ku bixiyay gobollada Sool iyo Sanaag ayaa noqonaya markii ugu horaysay taariikhda tan iyo burburkii dawladdii dhexe in masuul heer wasiir ah oo ka socda dawladda Soomaaliya uu cagta saaro carrada Sool iyo Sanaag.
Booqashada wasiir Jamaal waxay sonkorta ku kicisay Somaliland ayadoo wasiirkeeda arimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shir uu afka furtay. Sacad ayaa socdaalka Jamaal ku sheegay daandaansi iyo xaalad abuur, wuxuuna ka digay in dagaal ka dhaco deegaamada uu Jamaal booqashada ku bixinaayo.
Shacabka ku dhaqan gobollada Sool iyo Sanaag ayaa soo dhawayn diiran u sameeyay wasiir Jamaal iyo wafuudda uu horkacayo, wuxuuna ka dhagaystay baahiya ay qabaan gaar ahaan kuwa amni, waxbarasho, caafimaad iyo dhanka wadooyinka. Waxay sidoo kale indho indhayn ku sameeyeen jidka Ceerigaabo oo wali qabyo ah, gacantana ay ku hayaan shirkad maxali ah oo dhaqaaleheeda ay bixinayaan ganacsatada iyo jaaliyadda dibadda ee deegaamadaasi.
Lama oga in qaylada ka soo yeertay dhanka Somaliland ay u badali doonaan mid gacan kahadal ah iyo in kale maadaama Dr. Sacad uu hadalkiisu u muuqday hanjabaad iyo cago juglayn. Jamaal ayaa maalmo ku sii nagaan doona gobollada Sool iyo Sanaag waxaana la filayaa inuu cagta sii mariyo magaalooyin kale oo 2 gobol kamid ah inta uusan dib ugu soo laaban caasimadda qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho.